My Note ( IT ): network ချိတ်နည်း (ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံး data တွေပိုမယ်၊muti join games များကို ကစားကြမယ်။ အင်တာနက်လိုင်း မျှဝေခွဲသုံးမယ်..)
My Note ( IT )
(စတင်သည့်ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၊ ၂၁ ရက် )
network ချိတ်နည်း (ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံး data တွေပိုမယ်၊muti join games များကို ကစားကြမယ်။ အင်တာနက်လိုင်း မျှဝေခွဲသုံးမယ်..)
ကဲ သူငယ်ချင်း network မချိတ်တက် သူများအတွက်သာ(သီးသန့်) တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်း တွင်သိလိုသည်များ ကိုလေ့လာပြီး ပြန်လည်း တင်ပြပါသည်။ အရင်ဆုံး လိုမှာ rg45 လိုခေါ် တယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ lan ကြိုး လိုခေါ် မယ်ပေါ့ .....
အဲဒီကြိုး ကို စက်နှစ်လုံးဘဲဆို တစ်ချောင်းရှိ ရင်လုံးလောက်ပြီးပေါ့ စက်များများဆို ရင်တော့ နောက်တစ်မျိုး switch လိုမယ် ကြိုးတွေလိုလာမယ် ။ စက်များရင် များသလို အပေါက်များများဝယ်ပေါ့ ကြုံတုန်းပြောလိုက်အုံမယ် switch ဘူးဝယ်မယ် ဆိုရင် 10/100mbpsဆိုရင် ဈေးတော်တယ်။ နောက်ထွက်တာ 10/100/1000 mbps တို့မျိုးဆို ဈေးကြီးသလို အပေါက်များ
ရင်လည်းဈေးကြီးတယ် ဈေးကြီးတော့သုံးရတာကောင်းဒါပေါ့ ဟဲ....ဟဲ...
စလိုက်ရအောင် ကြိုးစ တစ်ဘက်မှ ခေါင်းကို ပထမ စက်ရဲ့ lan အပေါက်မှာထည့် ကျန်တစ်ဘတ်ကို ဒုတိယ တစ်လုံးရဲ့ lan အပေါက်မှာ ထည့်ပေါ့ စက်တွေ ကိုဖွင့် မယ် ကွန်ပြူတာရဲ့ start ဘာညာဘက်ထောင့်မှာ အချက်ပေးနေ ပြီး ပြောမယ်နော် ဒါက ၀င်းဒို xp ကို လုပ်ပြမှာ ဖြစ်ပြီး ၀င်းဒို7ကိုတော့ ဦနှောက်ကို သုံးပြီး လုပ်တော့ပေါ့ ။ တကယ်လို start ဘာရဲ့ ညာထောက် မှာ မီးမှိတ်တုန် မှိတ်တုတ် မပြရင် တော့ lan driver လိုနေပြီး motherboard driver ခွေ မောင်းထည့်တော့ ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီး ။ ဒါတောင်းအဆင်မပြေသေးရင် .........အောက်မှာ ၀ယ်ထည့် တော့......lan card ဒါလည်း 10/100mbps နဲ့ 10/100/1000 mbps တို့ရှိတယ် ကွာခြားချက်ကတော့ ကြည်ဒါနဲ့သိနိုင်တယ်မဟုတ်လာ data ပို့နှုန်းလိုထင်တယ် (ဒါကနောက်ဆုံးအကြံပါ မလိုအပ်ပါဘူး)
ပြည်စုံပြီးဆိုရင် setting ချရအောင် start ၀င်မယ် my network place နိုက်မယ်....
ပြီးရင် view network connections ကို ဘယ်ဘက်မှာ ရှာပြီးနိုက် .....
တွေ့ပြီး local area connection....ပြောရအုံးမယ် သူငယ်ချင်းရဲ့ စက်မှာက တစ်ခုဘဲ တွေ့တယ် ပုံမှာ ၃ ခုတောင် မပြောနဲ့  ကျွန်တော်ကဟတ်ဝဲ ကိုကလိ တယ်လေ PCI slot အားနေလို ၀ယ်ထည့် ဟိုချိတ်ဒီချိတ် ဒါကပြသနာ မဟုတ်ဘူး
အဲဒါကိုထောက်ပြီး ညာကလစ်လိုက် properties ကလစ်...အကွက်ရဲ့ အောက်ကိုဆွဲချရင် internet protocol (TCP/IP) တွေ့လာ အန်..... အေဒါကို ကလစ်ပေါ့ ပြောပြရအုံးမယ် ၀င်းဒို ၇ မှာဆိုရင် အဲဒါနဲ့ အလာတူစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းတွေ့မယ် ၆ ပါတဲ့ ဟာမလုပ်နဲ့ ကိုယ်နဲမဆိုင်းဘူး ၄ ပါတဲ့ဟာကိုလုပ်......
အိုင်းပီ ထည့်ရမယ် အဆင့်ရောက်ပြီး use the following ip address ကို အစက်ကလေး လုပ်ပြီး ip adress မှာ 192.168.1.1 လိုစမယ် ဒါက ပထမ တစ်လုံးမှာနော် ဒုတိယတစ်လုံးမှာ 192.168.1.2 ပေါ့ တတိယတစ်လုံးရှိရင် 192.168.1.3 စသည့်ဖြင့် ....တစ်ကယ်လို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် 192.168.1.1 လိုမထည့်ချင်ရင် ပထမတစ်လုံးကို 192.168.2.1 ......ဒုတိယတစ်လုံးကို 192.168.2.2........တတိယတစ်လုံးကို 192.168.2.3...စသည့်ဖြင့်...
subnet mask မှာမောက်နဲ့ ထောက်လိုက်ဒါနဲ့ သူဟာသူ
255.255.255.0 ဆိုဖြည့်ပြီးသာ...ပြီးရင် အိုကေ....အိုကေ....ခဏလောက် စောင့်လိုက် သူအလုပ်လုပ်နေပြီး......ဟော ......... connect .....ဒါဆိုနက်ဝက်ချိတ်တဲ့ အကန့်တော့ပြီပြီး.....
ပထမ စက်က ကိုကိုယ်တွေ့လာ တစ်ဖက်တစ်လုံး ကိုလည်း တွေ့ရဲ့လာ စမ်းကြည်ရအောင်....အရင်ကလို အောက်ကဘယ်ထောင့် က start ကိုနိုက်ပေါ့
run... အဲဒါနိုက် တကယ် လိုမတွေ့ သူပျောက်နေတယ် ကိစ္စ မရှိဘူး ကီဘုတ်က shot cut အနေနဲ့ ကီးဘုတ်ရဲ့အောက်မှာ ctrl နဲ့ alt ကြားက ၀င်းဒို ခလုတ်နဲ့ r နဲ့တွဲပြီးနိုက် လိုက်ဘောက်တစ်ခုပေါ်လာမယ် အဲဒီမှာ cmd လိုရိုက်ထည့်လိုက်..ok.. နိုက်လိုက်ရင် အမဲကွက်နဲ့လာပြီး အေဒီမှာရေးထည့် ဖိုအချက်ပြနေပြီး ping တစ်ဘားခြားလိုက် 192.168.1.1 အမ်းတာခေါက်လိုက် replay စသည့်ဖြင့် လာမယ်ဆိုရင် ရပြီးအဲဒီမှာဘဲ နောက်တစ်လုံးကိုခေါ်ကြည့်ရအောင် ping 192.168.1.2 အမ်တာခေါက်အဆင်ပြေတယ် .
connection time out ဆိုရင် မရဘူး ပြန်စစ်ကြည်
အိုကေ အားလုံးချိတ်လိုတော့ပြီပြီး အဆင်ပြေပြီး
မှတ်ချက်။ ။အထက်ပါပိုစ် သည် offline အတွက်မျှသာ။အင်တာနက် ကွန်နရှင်ကို gateway တစ်ခုတည်းကနေ ချိတ်ထားတဲ့ စက်အချင်းချင်း ကိုတော့ အထက်ပါနည်းတွေကို သုံးစရာမလို သူဟာသူဖြေရှင်းပြီးသာပါ.... အောက်က ပိုစ်ကိုဘဲ လေ့လာလိုက်ရင်ရပြီး
အရှေ့ကကိုကြီးတွေ အွန်လိုင်းမှာ ပိုစ်တင် ဒါ တွေကိုနာလည်းလာတယ် လေစားမိလာတယ် ဒီမှာက ပိုစ်တစ်စောင်ပြီးဖိုက အချိန်ယူရတယ် ကော်နရှင် ကပြတ်ထောက်ပြတ်ထောက်နဲ့ လေ ။ ကျွန်တော် ဒီပိုစ် ကိုတင် တာထောင် အချိန်တစ်ရက် လောက်ပေးရတယ် photoshop လည်း နာလည်းသလောက် ပြုပြင်ဓါတ်ပုံတွေရှာ သူများတွေလို သင်တန်းနဲ့တက်ထားရင် တော့ မြန်ဒါပေါ့ အခုကကျွန်တော် မသိရင် ဂိုလ်ဂဲ မှာရှာလိုက်ဖတ် ပြန်လုပ် ဒီလိုဘဲ လေ့ကျင့်ရဒါလေ..................ပိုစ်တင်သူ mrwinkyawaung4 ................
ကဲ အချိန်ရှိတုန်း နောက်တစ်မျိုး..... ခွဲပြီးတင်မလို ဘဲ အခြေခံက ပြန်စရမှာ ပျင်းလို .............. ဒီဘတ် ကွန်ပြူတာ က data တွေကို ဟိုဘတ် ကွန်ပြူတာကို ပိုကြရအောင် ....အထင်တော့ မသေးနဲ့ နော် usb 2.0 / usb 3.0 ထက် data ပိုနှုန်းအများကြီး မြန်တယ် .... gateway တစ်ခုတည်းကနေ wifi ချိတ်ထားရင်လည်းပိုလို ရတယ် လက်တော့မှာ က 54mbps ။ ကြိုးနဲ့ ကျတော့ 100mbps တို့ 1gbps
ရနေပြီးလေ.... အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာ က ကွန်ပြူတာ တွေရဲ workgroup တူအောင်လုပ်ရမယ် ၀င်းဒို os တွေမတူ လည်းရတယ် ၀င်းဒို xp နဲ့ ၀င်းဒို7နဲ့ လည်းရတယ် ။my computer ညာကလစ် properties
computer name ကိုနိုက် computer descriptio;ဥပမာ station1 နောက်တစ်လုံး ကို station2 စသည့်ဖြင့် workgroup မှာဆို ဥပမာ abc ကိုယ်ကြိုက်သလို ပေါအေဒါက စက်အားလုံးတူမှရမှာနော်
ကွန်ပြူတာ နာမည်တွေပေးမယ် ပထမ တစ်လုံးကို station1 လိုပေးရင် ဒုတိယတစ်လုံးကို station2 လိုပေးပေါ့.....နာမည်ပေးရင် ဆက်တိုက်ရေး တစ်ဘာ မခုန်နဲ့ တခြားစက် ကရှာရဒါ လွယ်ကူအောင်
အိုကေ.... အိုကေ......မိမိစက် restart ကျမယ် ပြန်တက်လာမယ် ဒါဆို တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ဖိုင်းကူးပြောင်းဖို ပထမ အဆင့် ပြီပြီး .....
ဒုတိယအဆင့် အနေနဲ့ data ရှိတဲ့ ပထမ စက်မှာ ပြုလုပ်ရမှာကတော့......... ကျွန်တော်မှာဆိုရင် ပါတေးရှင် D ကိုသူများ စက်တွေ ယူသုံးရအောင် လုပ်မယ်..... my computer ဖွင့်မယ် ပါတေးရှင် D ကို ညာကလစ် မယ်..... properties...
ကိုနိုက်မယ် sharing နိုက်မယ်
အဲဒီမှာ အပြာရောင်းနဲ့ စာတမ်း if you understand .................စသည့်ဖြင့် တွေ့မယ် အဲဒါကိုနိုက်လိုက်.....
.share this foder on the network မှာ အမှတ်ခြစ် လိုက်ဆိုရင် တစ်ဖက်စက် ကယူသုံးလို ရတယ် တကယ်လို အောက်မှာ ပါ allow network useres to chance my files ပါအမှတ်ခြစ်ရင်တော့ တစ်ဖက်စက် က ဖိုင်ကိုပြန်တင်လိုရတယ် ဖြတ်လိုက်လိုလည်း ရတယ် သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ အပေါ်တစ်ခု ဘဲ အမှတ်ခြစ်ရင် ပိုပြီး ကောင်းမယ် ထင် တယ် နောက်မိုဆိုရင် သူများကတစ်ဖက်စက် ကနေ data တွေကိုယူ ရုံတင် မကဘူး ဖျတ်ဆီ သွားရင် ကိုယ်ဘဲ ဆုံးရှုံးမယ်ပေါ့........... အိုကေ...........အိုကေ...........ဒါဆို data ပေးတဲ့ စက်က setting ချလိုပြီပြီး.......တစ်ဖက် စက်မှာ ဘယ်ကနေ ရှာပြီး data ယူရမလဲ ဆိုရင် တော့
...ဒုတိယတစ်လုံးရဲ့.......my computer ဖွင့်မယ် ....အပေါ် နားလောက်မှာaddress ဘေးကအကွက်မှာ \_\_station1 ပြီးရင်အမ်းတာ ခေါက်လိုက် ဟော တွေ့ပြီး.... ပထမ စက်ရဲ့ပါတေးရှင်း D ကို အဲဒါ ကို ဖွင့်ပြီး data ယူသုံးလို ရပြီး .....အဲဒီ လိုမျိုး သူများတွေ ကတော printer ကို ခွဲဝေ သုံးကြတယ် ကျွန်တော်က တော့ printer မ၀ယ်နိုင်သေးလို တစ်ကြောင်း ကိုယ်အတွက် မလိုတာရယ် မသုံးတက် တာရယ် အေးဒါကြောင့် မပြပေးနိုင်ပါဘူး ......သူငယ်ချင်း တို့ အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးရဘူးနော် .........
.................................................... mrwinkyawaung4 ....မှ ကိုယ်တိုင်း သိရှိ သည် များကို ပြန်လည်း မျှ ဝေသည်.................................
ကဲ့ နောက်တစ်မျိုး ....... မျက်လုံးညောင်း လည်း ဖတ်လိုက် အုံး ဂိမ်းမာ တွေ အတွက် join game ဗဟုသုတ........general games များကို ကစားရာတွင် မိမိစက်မှာ ရှိတဲ့ general game version နဲ့ တစ်ဖက်စက်မှာ ရှိတဲ့ ဂိမ်းရဲ့ version တူမှ ကစားလိုရမှာ ဖြစ်ပြီး serial number ကတော့တူ နေရင် ကစား လိုမရနိုင်ပါ....( ၀င်းဒို ကတော့ တူလည်းရ မတူလည်းရ)........ ဂိမ်း ချိတ်ဖို့ကတော့ အပေါ်က နက်ဝက် ချိတ်ထား ရုံ နဲ့လုံလောက်မှာ ဖြစ်ပြီး ပထမ စက်မှ ဂိမ်းထောင်မှာ ဆိုရင် muti.... ပြီးရင် local(သို့မဟုတ်)network....... creat game (သို့မဟုတ်) hot game နောက်တစ်ခြား စက်ကချိတ်မယ်ဆိုရင် muti....client (သို့မဟုတ်) join လိုလိုက်နိုက်လိုက် ရင် ..........အားလုံး က
play ..,... accet....တိုဆို ကစားနိုင်ပြီး
မှတ်ချက် ။ ။ ဘယ်ဂိမ်း မဆို join ဂိမ်းတွေ ကစားမယ် ဆိုရင် သတိ ပြုရမှာ က version တူရမည်
................................ပိုစ်တင် သူ mrwinkyawaung4....................
လာပြန်ပြီး မပြီးသေးဘူးလာ မမေးနဲ့ ခေါင်းစဉ် မှာကို က အင်တာနက်လိုင်း ခွဲဝေ သုံးမယ်ပါတော့ ဖော်ပြပေးရမယ်လေ....
အင်တာနက်လိုင်းခွဲ သုံးဖိုက မိမိ စက်က ကော်နရှင်း ဘယ်ကရထားလဲ mobile ကလာ ဒါမှမဟုတ် လက်တော့ ဆိုရင် wireless wifi ကလာ ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးလာ ...ဒါဆို motherboard lan အပေါက်ကကို..... ပထမ mobile/wireless wifi ကကော်နရှင် ရထားတယ် ဆိုရင် အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ my network place မှာ ညကလစ် properties ဖုိုင်း share ပေးတဲ့ လိုမျိုး လုပ်လိုက်ရင် သူမေးမယ် ဘယ်ကနေ ပေးမလဲ ပေါ့ အဲဒီမှာ motherboard lan အပေါက်ကနေလို လုပ်ပေး လိုက်ရင် နောက်တစ်လုံးအင်တာနက် သုံးလိုရပြီး........( lan ကြိုးကိုတော့ အရင် တပ်ထားရမယ်နော်)
နောက်တစ်ခု ကရှုပ်တယ် ဒါပေးမဲ့ ရှင်းပြမယ် ..... သူများဆီက ကော်နရှင် ကို လိုင်းခွဲ ရထားတယ်...ကိုယ်စက် မှာက motherbord lan အပေါက်တစ်ခု ဘဲ ရှိတယ် ဒီတော့ နောက်တစ်လုံးကို ကော်နရှင် ပေးမယ်
swith ဘူးနဲ့ ခွဲရင် ရတယ် ဒါပေးမဲ့ ကိုယ်ကသူများကခွဲ ယူ ထားတယ်ဆိုတော့ သူစက် server မှာ client ဇယားမှာနောက်ထပ် တစ်လုံး ပေါ်နေမယ် ဒါဆို လိုင်းခွဲပေးတဲ့သူလည်း စိတ်ညစ်သွားမယ် သူမသိတဲ့စက်တွေ/အိုင်ပီ တွေဝင်
လာတယ် ဆိုတော့ အဲဒါကြောင့် lan card တစ်ခု ထပ်ဝယ်ပြီး စိုက်ထည့်လိုက် ပြီးရင် အပေါ်ကလို ရှယ်ယာ အနေနဲ့ ပေးသုံးမယ် ဆိုရင် သူစက်မှာ မရှုပ်တော့ ဘူး အားလုံးအဆင်ပြေသွား မယ်.........................
မှတ်ချက်။ ။ အဲဒါ ကိုတော့ စက်မှာ အိုင်ပီး address မပေးနဲ့ အားလုံး ကို အင်တာနက် လိုင်း ရထားတဲ့
အတွက် သူဟာ သူဖြည့်သွား လိုက်မယ် ကိုယ် လိုက်ဖြည်မယ်ဆိုရင် တခါ တလေ connect
ဖြစ်နေပြီး လိုင်းတက် မရဘဲ ဖြစ်နေမယ်.....
..ပိုစ် ရေးသားသူ..... mrwinkyawaung4.........................
Posted by mrwinkyawaung4 at 9:59 PM
ကိုလင်းရဲ့ကမ္ဘာ March 16, 2017 at 6:29 AM
သူငယ်ချင်းရေ အမှတ်တရ စကားလေ ပြောသွားပါ :)
we visiter counter
we voice ( we friends written )
here free download ( up date )
mrwinkyawaung4. Ethereal theme. Powered by Blogger.